Ziya kujongeka njani iziphumo zeshishini kwi2018? | Ezezimali
Ziya kujongeka njani iziphumo zeshishini kwi2018?
Elinye lamaqhosha okumisela ukuvela kwemarike yemasheya kulo msebenzi kukho iiakhawunti zeshishini eziboniswe ziinkampani ezidwelisiweyo kwikota nganye. Yiparameter yokubaluleka okukhethekileyo ukuze amaxabiso akho thatha imeko enye okanye enye. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abatyali mali abaninzi bathathe esi sicwangciso-qhinga sokungena nokuphuma kwiimarike zezemali ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Akumangalisi ukuba sithethe ngenye yeedatha ezinokuthenjwa kunye neenjongo ezibonelelwa ziimarike zezemali. Akumangalisi ke ngoko ukuba ixabiso ekujoliswe kulo lihlala lixhomekeke kolu vavanyo lokuba iinkampani kufuneka ziphumelele amatyeli amane ngonyaka.
Ewe, iziphumo zeshishini zonyaka ophelileyo bezintle kakhulu. Ngokufumana ukukhula okujikeleze i-15% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, ukwehla kuye kwafunyanwa ngokubhekisele kwidatha yekota ezimbini zokuqala zonyaka. Apho umsebenzi weshishini ikhule ngaphezulu kwama-20% amanqanaba. Eli candelo lohlalutyo lixhalabisa icandelo elifanelekileyo labatyali mali. Ngengqondo yokuba bacinga ukuba icandelo elilungileyo lomjikelo wezoqoqosho eSpain sele linikwe isaphulelo. Kuya kuba kubaluleke kakhulu ukujonga ukuba zeziphi iziphumo zeshishini kwikota yokuqala yonyaka omtsha ezakuba kukujonga ukuba yintoni imeko yokwenene yeenkampani zaseSpain.
Enye into enokuba nefuthe elikhethekileyo kwezi ziphumo ziziphumo zoko kubizwa Ingxaki yeCatalan. Ukuya kuthi ga kwinqanaba apho inokuchaphazela ukubalwa kwemali kweenkampani ezidweliswe kwingeniso eyahlukileyo. Ayisiyiyo kuphela evela eCatalonia, kodwa nakwabanye abanobudlelwane bezorhwebo nale nxalenye yommandla wesizwe. Kwimeko nayiphi na into, kuya kufuneka silindele malunga nento enokwenzeka ngale datha kwi-2018. Into enokuthi ibe nefuthe kwixabiso lezabelo eliza kuhla kakhulu ngenxa yolu tshintsho kulindelo.
1 Ukulindelwa kweziphumo ngo-2018
2 Ufanele wenze njani?
3 Amaqhinga okusebenzisa idatha
4 Ungenza ntoni ngeziphumo ezilungileyo?
5 Ezinye izibonelelo zokusetyenziswa kwayo
Ukulindelwa kweziphumo ngo-2018
Ngayiphi na imeko, uqikelelo lwalo nyaka mtsha lubonisa ukuba imida yenzuzo iya kumodareyitha. Njengomphumo wokuphela okubanzi komjikelo wezoqoqosho onamava. Ngale ndlela, ukusuka kwisebe lohlalutyo lweBhanki kuyacaca ukuba isekwi Inqanaba lenkunzi kuqoqosho lwamazwe ngamazwe. Le nto kufuneka incede ukulingana kwihlabathi liphela kunyuke ebhodini ngeli xesha. Nangona kuwo onke amathuba okuba kuncinci kunamava kwimithambo yangaphambili.
Iziphumo zekota yokuqala ziya kubaluleka kakhulu ekumiseleni indaleko eziza kuthathwa zizi-equity zaseSpain kwinxalenye elungileyo yonyaka. Iya kuba yenye yeedatha abatyali mali abancinci nabaphakathi abaya kuthi bazi ngayo. Ukuya kwinqanaba lokuba nayiphi na Ukuphambuka kuqikelelo kunokubangela utshintsho ngesiquphe kwixabiso lamaxabiso. Ewe kunjalo, ngandlela thile okanye enye eya kuthi ivelise oko kwimisebenzi unokufumana imali eninzi. Kodwa ngenxa yesizathu esifanayo, kukushiya ngaphezulu kwe-euro kunokuba kufanelekile kwiipaki zezemali.
Ukuthatha ithuba kule datha eza kuphuma ngo-2018, awuyi kuba nanto unokuyenza ngaphandle kokungenisa uthotho lweengcebiso eziza kuba luncedo kakhulu ekwenzeni ulondolozo lwakho lube nenzuzo. Ezi zezinye zezona zichaphazelekayo.
Naluphi na uphuculo lweziqikelelo ekufuneka uluthathile qokelela izikhundla kumaxabiso akhethiweyo.
Unokuhlala kumgaqo obonisa ukuba kufuneka thenga ngamarhe kwaye uthengise ngeendaba. Kwezi meko zikulethela uluncedo olukhulu ekusebenzeni.
La ukuguquguquka Kwiintsuku ezingaphambi kokupapashwa kweziphumo ziphezulu kakhulu kwaye ziya kukunceda usebenze kwiseshoni enye yorhwebo.
Ngokwesiqhelo iingcongconi Azichaphazeli amaxabiso amaninzi kwimarike yesitokhwe sikazwelonke kwaye ngokuchanekileyo zizindululo apho kuya kufaneleka ukubeka umngcipheko kwinkunzi yakho.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ezi ziphumo zeshishini zivelisiwe amatyeli amane ngonyaka. Ke ngoko, uya kuba namathuba aliqela ukuze ufumane inzuzo ngokuhamba ngendlela eyonelisayo.
Okwangoku sikwi imeko yokuxhoma Ke nakuphi na ukumangaliswa okungalunganga kuya kohlwaywa kakhulu ziimarike zemali. Ngomngcipheko wokuwa okubukhali kwiimarike.
Sukuzama ukukhawulezisa imisebenzi ukuya kwelona liphezulu njengoko usengozini enkulu khotyokiswa kumaxabiso owakhethileyo ngala mathuba. Ngaphandle kokukwazi ukulungelelanisa amaxabiso okuqala, njengoko ufuna kwasekuqaleni.
Amaqhinga okusebenzisa idatha
Ngayiphi na imeko, ungathatha ithuba lokupapashwa kweziphumo zoluhlu lweshishini kuluhlu imisebenzi yokunyusa kwiimarike zezabelo. Ngenjongo ecace gca kukwenza ingeniso kuyo yonke intshukumo yakho kwimarike yemasheya. Ngamathuba amakhulu onokuthi uphucule ibhalansi yeakhawunti yakho yangoku kwezi ntshukumo. Ngala manyathelo alandelayo esikuveza ngezantsi.
Enye yeenjongo zeli qhinga kukuba kwindawo entle yoku ukuvelisa inzuzo enkulu kule qhinga likhethekileyo. Iya kuba lixesha leeveki ezimbalwa apho kuya kufuneka uqokelele izabelo kwaye uzithengise ngamaxabiso aphezulu kunalawo acatshulweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Umzuzu wokupapashwa kweziphumo zeshishini unokusetyenziselwa rhoxisa izikhundla. Nangona ezi zilungile kakhulu kuba izilungiso ezinzulu zinokuveliswa ukuzama ukuhlengahlengisa umthetho wokubonelela kunye nemfuno. Ayinamsebenzi into yokuba uphulukane nokonyuka okungaphezulu okunokubakho kumaxabiso.
Imithombo yeendaba ekhethekileyo ihlala inika umkhondo ongaqhelekanga malunga nokuba ziya kuba njani na ezi ziphumo. Ungalithatha eli thuba lokuthatha inyathelo elinye okanye elinye kwiimarike zezemali. Iya kuba ulwazi oluluncedo kakhulu oko kunokukunceda ukwenza imisebenzi yakho kwimarike yemasheya ibe nenzuzo. Ngale ndlela ke thintela umngcipheko ongeyomfuneko ekuthatheni isikhundla kwizibambiso ezikhethiweyo.
Zonke ezinye zeziphumo ngaphantsi kokulindelweyo yenziwe kufuneka isetyenziselwe ukulungisa izikhundla ngokukhawuleza. Hayi ngelize, uzibeka emngciphekweni omkhulu wokuba ungashiya ii-euro ezininzi endleleni. Awusenaso esinye isisombululo ngaphandle kokuthintela le meko ingafunekiyo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ungenza ntoni ngeziphumo ezilungileyo?
Ukuba ekugqibeleni le meko iyenzeka, akufuneki woyike ukuvula izikhundla kwizabelo. Ayilolize, kukuhambela phambili kwe- ixesha elifutshane neliphakathi. Ngokukhetha ngakumbi ukufumana izibonelelo ngaphandle kwemizamo egqithisileyo kwicala lakho. Ubuncinci kude kube ngumhla omtsha xa kupapashwe iziphumo zekota elandelayo. Uya kuba nexesha elaneleyo lokuphuma kwezi ntshukumo kwiimarike ze-equity. Njengoko kwenzekile ngamanye amaxabiso afanelekileyo kwisalathiso esikhethiweyo sentengiso yeSpanish. Umzekelo, ngeFerrovial okanye i-Inditex njengabameli beli qhinga lotyalo-mali.
Kwelinye icala, unokulinda le datha ukuba ikhanyise kwaye ube nokhuseleko olukhulu kuyo yonke imisebenzi. Kuyinyani ukuba uya kuphoswa yinxalenye amandla aphezulu, kodwa kuya kuba kufanelekile ukuba ungazibeki emngciphekweni ogqithisileyo phambi kotshintsho ngequbuliso kwixabiso. Into enokuthi ngaphandle kwamathandabuzo yenzeke kuwe ngaphandle kokusebenzisa esi sicwangciso-qhinga. Ngokuqinisekileyo iya kukwenza ufumane imali ekupheleni konyaka. Kwinto enye okanye nangaphezulu eyenziweyo ngeli xesha.
Ezinye izibonelelo zokusetyenziswa kwayo
Ngokuqinisekile ukuba ucinga ukuba zeziphi izibonelelo onokuzifumana kwesi sicwangciso ukusukela ngoku. Ewe kuya kuba luncedo kuwe ukuba uthathe ingqalelo ukuba zeziphi ezinye zegalelo ezinokukunceda ufumane imali ethe kratya kula maxesha. Qaphela kuba ungayidinga ngaxa lithile okanye enye.
Enye yeenkqubo ezisebenzayo ze khusela utyalo-mali lwakho. Phakathi kwezinye izizathu kuba ziya kuthintela iintshukumo ezantsi ngesiquphe. Ubuncinci iiveki ezimbalwa apho le mpembelelo kwixabiso lesabelo liza kuqala ukusebenza.
Inokuba linyathelo lokuba amaxabiso ahambe kuhlaziyo lokungqinelana okuthile ukusebenzisa ezona ndlela zingcono zotyalo-mali. Kunye Umda omncinci wempazamo oko kuyakunceda ukuba ufezekise iinjongo ezilandelelweyo ukusuka kulo naliphi na ixesha lesigxina.
Ungayiphinda le misebenzi mangaphi amaxesha ofuna ukuba lo msebenzi wedatha uphindaphindiweyo kukhuseleko oluninzi oludweliswe kwii-equity zaseSpain. Ngaphandle kwenqaku lobuchwephesha elinokubakho kwezi asethi zemali ngexesha elithile lokupapashwa kwazo.
Ngemini yokupapashwa kwayo, a ukungazinzi okuphezulu ngamaxabiso kwaye kunokuba yimeko enomdla kakhulu kuwe ukuba wenze urhwebo. Oko kukuthi, sebenza ngokuthenga kunye nokuthengisa kwiseshoni enye yokuthengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ziya kujongeka njani iziphumo zeshishini kwi2018?
Kutheni ivolumu ibaluleke kangaka engxoweni?
Amathuba eshishini kwimarike yemasheya yalo nyaka